Fact Check : “UEC ကို စော်ကားသည့်ကိစ္စများ စတင်အရေးယူပါတော့မည်” ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Fact Check : USDP က မဲလိမ်မှုအတွက် UEC ကို တိုင်ကြားတဲ့စာတွေ ဖျောက်ဖျက်ခံရဆိုတာ ပါအဝင် အချက်အလက်အမှားများ
Fact Check : သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခံရသူ ကျောက်မဲ NLD အမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းတု/သတင်းမှား ထွက်ပေါ်
Fact Check : မဲလိမ်၊ မဲခိုးမှုတွေကို မဖြေရှင်းပေးရင် အိမ်စောင့်အစိုးရဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတုထွက်ပေါ်
Fact Check : ဆရာမတစ်ဦးကို ၃ သိန်း၊ ၅ သိန်း ရရှိကြောင်း ဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားထွက်ပေါ်
Wednesday, December 09, 2020 “ဆရာမတစ်ဦးကို နိူဘာလ (၈) တရက်တည်းနဲ့ ၅ သိန်းကြိုပေးထားတာပေါ် အချို့ဒေသ ၃ သိန်းဟု ကြိုသိနေတာမယုံ ခုတော့ ပေါ်ပီ ကာပေးလို့တောင်မရဝန်ခံထွက်ဆို။ ဒီကိစ္စအတွက် ကလေးတွေမသိလို့ မှားတယ်ဆိုပြီး NLD ပါတီမှ တောင်းပန်ရာ ဒု-တပ်ချုပ်က ဥပဒေအတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွှက်မည်...
နစ်နာကြေး ကျပ် သိန်းငါးထောင် ရလိုမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို တရားစွဲ
နစ်နာကြေး ကျပ် သိန်းငါးထောင် ရလိုမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို တရားစွဲ ++++++++++++++++++++++ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၈ ဗစ်တိုးရီးယားအမှု တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲ ချုပ်နှောင်ခံထားရရာက ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ ကိုအောင်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို နစ်နာကြေး ကျပ် သိန်းငါးထောင် ရလိုမှုနဲ့ တရားမ နစ်နာမှုအဖြစ် စွဲဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုအောင်ကြီးရဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က...
Fact Check : မဲစာရင်းအမှားများ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားများ ထွက်ပေါ်
Fact Check : မဲစာရင်းအမှားများ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားများ ထွက်ပေါ် +++++++++++++++++++ Monday, December 07, 2020 ဘယ်သူတွေက စစ်ဆေးနေမှန်းမသိရဘဲ မဲရုံတွေမှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ မဲစာရင်းပိုနေ၊ မှားနေမှုတွေဆိုပြီး သတင်းမှားဖြန့်ဝေမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွေက စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့ မဲစာရင်းအမှားတွေဆိုပြီး ပေါ်ဦးဆိုတဲ့ account...
Fact Check : ရွေးကောက်ပွဲပြန်မလုပ်ရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကအနိုင်ရသူတွေ နုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားထွက်ပေါ်
Friday, December 04, 2020 ရွေးကောက်ပွဲပြန်မလုပ်ပေးရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေက နုတ်ထွက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားတစ်ခု ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီသတင်းမှားကို Union Politics ဆိုတဲ့ FB Page တစ်ခုကနေ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ည ၁၁...
Fact Check : တပ်မ ၈၈ က မဲပုံးခိုးသွားတဲ့သူကို တပ်မတော်အပူတပြင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းအမှားများထွက်ပေါ်
Sunday, November 29, 2020 ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုသိရဖို့ တပ်မတော်သားတွေမဲပေးခဲ့တဲ့ မြို့နယ် ၂၀၀ ကျော်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောကြားချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ မင်းထက်သာဆိုတဲ့ အကောင့်က “တပ်မ ၈၈ က မဲပုံးတစ်ပုံးလုံးခိုးသွားတဲ့...
Fact Check : တပ်မတော်က ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အတည်မပြုသေးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းမှားထွက်ပေါ်
Wednesday, December 02, 2020 "တပ်မတော် ငြိမ်မနေဘူးနော်" လို့အစပြုထားတဲ့ သတင်းမှားတစ်ပုဒ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် မွန်းလွဲချိန် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ မဉ္ဇူသက်ထားဆိုတဲ့ account ကတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေသူတွေ ယခုထိရှိနေပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ညနေ...
Fact Check : သတင်းအမှားကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထည့်သွင်းကိုးကားခဲ့
Friday, November 27, 2020 ပြည်ထောင်စုကြံံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဦးဆောင်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ် (NPA) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိမ်းကြည်က သတင်းမှားလို့ အတိအလင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်အမှားကို ကိုးကားပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက “ဦးလှသိန်းက UEC က ဝန်ခံတယ်၊ သူတို့ကတော့ မျှမျှတတ...
Fact Check : မဲမသမာမှု ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် မအိပ်ရဲဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Fact Check : မဲမသမာမှု ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် မအိပ်ရဲဆိုတဲ့ သတင်းမှား Thursday, November 26, 2020 “တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ မဲမသမာမှု ကျူးလွန်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်တောင် မအိပ်ရဲတဲ့ ဘဝကို ရောက်နေကြပြီ” လို့ အစချီထားတဲ့ ပို့စ်ကို Kyaw Swar လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ...
Fact Check : “စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် NLD ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုယ်စား အပြင်းအထန်ရှုတ်ချ” ဟူသည့် ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အမုန်းတရားဖြန့်ဝေပို့စ်
Fact Check : "စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် NLD ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုယ်စား အပြင်းအထန်ရှုတ်ချ" ဟူသည့် ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အမုန်းတရားဖြန့်ဝေပို့စ် Tuesday, November 24, 2020 "စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် NLD ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုယ်စား ကျွန်တော် အပြင်းအထန်ရှုတ်ချသည်" လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့၊ ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အမုန်းတရားဖြန့်ဝေရေးသားချက်များစွာဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အမှားပါတဲ့...
Fact Check : “NLD အစိုးရလက်ထက် ဖျက်ဆီးခဲ့သော နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသောဥပဒေများ” ဆိုတဲ့ သတင်းတု/သတင်းမှား
Fact Check : "NLD အစိုးရလက်ထက် ဖျက်ဆီးခဲ့သော နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသောဥပဒေများ" ဆိုတဲ့ သတင်းတု/သတင်းမှား Sunday, November 08, 2020 "NLD အစိုးရလက်ထက် ဖျက်ဆီးခဲ့သော နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသောဥပဒေများ" လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ အချက်အလက်မှားနေတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်...
123...5151 ၏စာမျက်နှာ 1